अमरदीप मोक्तान जेठ ३१ गते हुने दोस्रो चरणको गाउँपालिका र नगरपालिका चुनावको तयारी चरम उत्कर्षमा छ । तराई मधेसका बहुसङ्ख्यक मतदाता लोकतन्त्रको महापर्वरुपी चुनावमा भाग लिन आतुर छन् । दोस्रो चरणको चुनावमा सहभागी हुन मधेसी दलद्वारा प्रस्तावित गरिएको मागमध्ये स्थानीय तह थप्ने मागका विषयमा सरकारले २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णयपछि तराई..
कल्पित पराजुली प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता गराइएको महाअभियोग प्रस्त..
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ न्यायालय स्वतन्त्रताको मन्दिर हो । प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअ..
रञ्जु दर्शनाको इस्टकोट
-कृष्णज्वाला देवकोटा सुरुमा एउटा सत्य घटना । एक जना नेताले उच्चपदस्थ एक कर्मचारीसँग पार्टी..
‘सम्माननीय दाहालजी’ र ‘सम्माननीय ओलीजी’का नाममा
–निमकान्त पाण्डे– पंक्तिकारले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा नहुँदै ..
प्रचण्डजी देश बनाउनुभयो अब पार्टी बनाउनुस्
केदारनाथ नेपाल (निश्चल) इतिहासमा पहिलो पटक राजनीतिक अन्यौलता र केही छिटफुट घटनाका बीच स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसलाई पहिलो पटक किन भनिएको हो भने पहिलेको जस्तो अधिकारविहीन नभएर स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएर निर्वाचन सम्पन्न भएको हुँदा पहिलो पटक भनिएको हो । यसले जनतामा खुशी उत्पन्न गराएको छ । सानोतिनो काम..
राष्ट्रप्रेमका नाममा उदन्डता
खेमराज दाहाल लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको भ्रमित राष्ट्रवादको प्रचार सुरु भएको छ । विपक्षीको खरो विरोध र आलोचना गर्दै आफूलाई मात्र राष्ट्रियताको सवालमा संवेदनशील भएको देखाउने प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रवादको परिचय नै अलग हुनपुगेको छ । अलग अलग कालखण्डमा अलग अलग राजनीतिक धारले यसै गरी आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउने खोजे । ..
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ कुखुराले चारो खोज्छ, आफ्नो पेट भोकै भए पनि चल्लाका लागि अर्पिन्छ । शत्रुरुपी बिरालो या कुकुरसँग सन्तान रक्षाका निम्ति आफ्नै ज्यानलाई दाउ थापेर झम्टिन पुग्छ । पशु प्राणी या त सारा सृष्टिमै आमाको माया सन्तानका लागि कति अमूल्य हुँदो रहेछ । कति दर्बिलो छ, ममताको आदर्श ।मातृदेवो भवः अथवा आमा देवता समान [&helli..
निन्दा गरेर हिंसा रोकिँदैन
वीरेन्द्र कटुवाल ‘परिवर्तनको निम्ति के हिंसा जरुरी थियो ? अथवा हिंसा र प्रतिहिंसालाई पर राखेर परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो ?’ नेपालमा भएको जनयुद्धलाई लक्षित गरेर सोधिने यो प्रश्न बारम्बार उठ्ने गर्छ । यो विषय सामाजिक चासो र बहसको बिषय बन्नुपर्ने थियो । बन्यो र बन्दै छ । मेरो विचारमा बहसलाई हिजो भएका हिंसात्मक [&hell..
स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको सवाल
रुपा शर्मा नेहा बैशाख ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचन दुईचरणमा हुने भनिएपछि मतदाताहरुमा उत्साह थोरै घटेपनि यसको रौनकतमा खासै कमी भने आएको छैन । झण्डै २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानिय तहको निर्वाचनको आफैमा ऐतिहासिक महत्व छ । संविधानमा उल्लेखित राज्यका संरचनामा विभिन्न समुदाय र लिङ्गको समावेशिताको हिसावले यो निर्वाचनलाई ऐतिहासिक मान्न सक..
विकल्पका लागि ‘निष्पक्ष सक्रियता’
मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’ गएको साता फ्रान्समा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा वैकल्पिक राजनीतिक धारको नेतृत्व गर्दै आएका इम्यानुअल म्याक्रोन अप्रत्यासित रुपमा निर्वाचित भएका छन् । उनको विजयीसँगै समग्र विश्वभर फेरि वैकल्पिक राजनीतिले चर्चा मात्र पाएको छैन परन्तु यसको अपरिहार्यता र बढ्दो आकर्षण पनि स्थापित हुनपुगेको छ । पूर्वमन्त्री म्..
किन चाउरिस् काङ्ग्रेस, आफ्नै पिरले
डा. बद्रीविशाल पोखरेल अहिले नेपाली काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस जस्तो छैन र पार्टीजस्तो लाग्दैन । एकजना पार्टी सभापतिको मनोमानीमा यो पार्टी चलेको देखिन्छ । मनौँ यस पार्टीमा एक जहान र परिवारको हालहुकुम मात्र चल्छ र तिनको मात्र एकलौटी शासन छ । नेतामुखी पार्टीमा पनि कम्तीमा सीमित नेताकाबीच छलफल हुनुपर्ने हो । जुँगा चले कुरा बुझेझैँ गर्नुपर्..
कुलमानमाथि किन लगाइन्छन् यस्ता आरोप ?
कीर्तिकुमार दुमी राई यस पटक राजधानी काठमाडौं र आसपासका क्षेत्र, पोखरालगायतका सहर लोडसेडिङमुक्त भयो । सुक्खायामको समयमा दैनिक रुपमा १८/२० घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट आक्रान्त उपभोक्तालाई यस पटक भने छुट्कारा मिल्यो । राजधानीबासीले बेला–बेला हुने प्राविधिक समस्याबाहेक अन्य समय बिजुली बाल्न पाइरहेको अवस्था छ । नेताहरुको भाषणमा मात्र सीम..
भूमिराज जोशी स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै छ । वर्षौंदेखि स्थानीयहरुले आफूले चाहेको नेता पाएका छैनन् । करिब बीस वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने भएपछि देश तथा विदेशबाट मतदान गर्न आफ्नो जन्मथलो फर्कनेको दिनप्रतिदिन लहर लाग्ने गरेको छ । चुनावी चर्चा परिचर्चा पनि उत्तिकै छ । चिया पसल लगायत विभिन्न ठाउँमा चुनाव ..
गोविन्द छन्त्याल आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको राज्यद्वारा लामो समयदेखि विभेदमा पारिएकाले जन्मिएको सङ्गठित अभियान हो । यो आक्रोश र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । एकल नश्लीय र जातीय हैकमवाद विरुद्धको सशक्त प्रतिकार हो । राज्यको नीति, नियत र व्यवहारको अदुरदर्शीताको परिणामको उपज हो, आदिवासी आन्दोलन । २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति मह..
चुनावी तालमेलले राजनीतिक आदर्श समाप्त
–निमकान्त पाण्डे– संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा सुरु हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन बडो अनौठो लाग्ने खालको देखिंदै छ । राजनीतिक दलहरूका राजनीतिक आदर्शहरू अब कसैका पनि फरक छैनन् भन्दा हुने भएको छ । राजनीतिक आदर्शका कुराहरू अब व्यर्थ साबित हुने भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको ..
स्थानीय तहको परिचालन र दिगो विकास
–चम्फासिंह भण्डारी योजनाबद्ध विकास नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रयास सुरू भएको छ दशक नाघेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेको नागरिक अधिकारसँगै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माण कार्य राज्यको प्रमुख कार्यसूचीमा परेको छ । विश्वव्यापीकरणको कारण मुलुकमा परेको आर्थिक एवम् सामाजिक प्रभाव, भूकम्पलगायतका प..
मधेसको राजनीतिमा राजपाको गठन
आदिम चौधरी मधेसको राजनीति तराईमा सामाजिक–जनसाङ्ख्यिक रुपले हेर्दा स्थानीय रैथाने, पहाडबाट झरेका र खुला सीमाका कारण भारतबाट आएका गरी मूलतः तीन समुदायको मिश्रण छ । मधेस केन्द्रित राजनीतिले नेपाली राजनीतिको मूलधारमा २०६३ देखि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारिरहेको छ । पहिलो मधेस विद्रोहमा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेका थिए । २०६४ सालको दो..
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ कर्मकाण्डीय घोषणापत्रे विकासमा गाउँका कैयौँ मतदाता महत्वाकाङ्क्षाका दिवा स्वप्नाका लेप लगाइएका छ । प्रतिबद्धताविहीन चुनावी घोषणापत्रे चुनावअघिका लागि मात्र हो यो । चुनावअघिका लागि कुर्लिएका आवाज बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने, मत माग्ने ढर्राले सोझा जनतालाई आँखामा छारो हालेर घोषणापत्रे दिवास्वप्नामा अड्किने तथ..
नगेन्द्र चाम्लिङ विक्रम संवत् २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिले श्री ३ सरकारको अवसान भयो । त्यसपछि २०१५ सालमा भएको बहुदलीय आम निर्वाचनलाई नेपालको पहिलो बालिग मताधिकार भएको निर्वाचन मानियो । यो निर्वाचनपछि धेरै निर्वाचनहरु भएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन, संसदीय निर्वाचन, जनमत सङ्ग्रहदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्म भएका छन् । निर्..
नैतिकवान जनप्रतिनिधिको छनोट
–डिला रेग्मी निश्चित अवधि र उद्देश्यका लागि जनताले आफ्ना हक अधिकार प्रयोग गर्न र गराउन छनोट गरेका व्यक्तिले जनतासामु आफूलाई शासक ठान्छन् र उनै दास मानसिकता बोकेर शीर्ष नेताको गुलामी गर्छन् । परिणाम पार्टीका शीर्ष नेताले समातेको गलत बाटोलाई अन्धसमर्थ गर्न बाध्य हुन्छन् जसको ज्वालान्त उदारण सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन..
न्यायपालिका संविधानभन्दा माथि हुँदैन
समीर कुलुङ राई राज्य सञ्चालनका ३ अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका आआफ्ना शक्ति र क्षेत्राधिकार संविधानले तोकिदिएको छ । व्यवस्थापिकाको काम कानुन निर्माण गर्ने, कार्यपालिकाले उक्त कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाको काम कानुनको व्याख्या, परिभाषा गर्ने हो । कुनै एउटा मात्रै अङ्गलाई धेरै अधिकार र शक्ति दिँदा उक्त..
लेख : सर्वोच्चको फैसला पछाडि यस्ता देखिन्छन् पाँच योजना
रामचन्द्र आचार्य सरकार राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कसरतमा थियो । कांग्रेस, माओवादी, मधेशी मोर्चा लगायतका दलहरु संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने सम्वादमा थिए । संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने र देशलाई निर्वाचनको माध्यमबाट राजनीतिक निकास दिने संकल्पमा सरकार लागिरहेकै थियो । यता, प्रतिपक्षी दलबाट मीडियावाजी गरिँदै थियो, ‘..
किशोर नेपाललाई मेरो प्रश्न
डा. बद्रीविशाल पोखरेल रातोपाटी अनलाइनमा प्रकाशित आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा प्रसिद्ध पत्रकार तथा लेखक किशोर नेपालले कतिपय कुरुप विचार व्यक्त गरेका छन् । नरेश ज्ञवालीद्वारा लिइएको अन्तर्वार्तामा नेपालले समसामयिक राजनीतिक सवालका विषयहरु उठाएका छन् तर नेपालले नेकपा एमाले र अझ ओली विरोधी अस्वस्थ र अराजनीतिक कटु आक्षेपमा समय धेरै खर्चेक..
सार्थक जीवनको खोजी
नुमनाथ पौडेल जीवनको सृष्टि संसारमा पूरै उज्यालो र पुरै अध्याँरो सम्भव छैन । अधिकतम उज्यालो सूर्यको सामीप्यमा छ, जहाँ हरेक वस्तु भष्म हुन्छ । अत्यधिक अँध्यारो हुने ठाउँ ब्ल्याक होल हो । यसमा सबै पदार्थ नजिक पर्नासाथ एकाएक लोप हुन्छन् । पदार्थ दृश्य हुन अध्याँरो र उज्यालोको सापेक्ष संयोजन हुन जरुरी छ । मन, भौतिक […]